Guddiga farsamada maamulka Galmudug oo aqbalay liiska xildhibaannada Ahlu Suna – Kalfadhi
Guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad gobaleedka Galmudug ayaa shaaciyay liiska xildhibaannada maamulka Ahlu suna ay ku yeelan doonaan dowlad gobaleedka cusub.
Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu xusay magacyada 20 xildhibaannada oo Ahlu sunna uga mid noqonaya dowlad gobaleedka Galmudug oo hadda dhismihiisa ay ka socoto magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda maamulkaasi.
Ahlusuna, ayaa dhawaan shaacisay in ay soo dhoweyneyso dhimaha maamulka, waxaana liiskeeda ay u dirtay Beesha Caalamka si ay marqaati uga noqdaan magacyada ay u direen guddiga.
Dowladda federaalka iyo Ahlusuna ayaa waxaa hareeyay khilaaf kaas oo markii dambe xal laga gaaray, waxaa dhammeynta khilaafkaasi soo dhoweeyay dowladdo badan oo ay kamid tahay dowladda Mareykanka.
Guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad gobaleedka Galmudug ayaa sheegay In howlahooda dhismaha maamulka uu gababo marayay dhawaana la qaban doono doorashada mamulka.
Xoghayaha Guddiga “Guddiyadda Maaliyadda ee Baarlamaanka waxaa ay ku adkeynayaan Wasaaradda Maaliyada ku dhaqanto sharciga PFM-ka”